musha » mbiru » Tourism Nhau » Nyika inofamba neAmerican manhamba uye hapana mibvunzo yakabvunzwa
Nhau Dzemhepo • Nhau dzendege • Aviation Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nyaya • Hawaii Kufamba Nhau • mwe • Vanhu vachigadzira nhau • Tourism Nhau • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Nhau dzeKufamba • Kufamba Wire Nhau • Inotyisa Nhau • USA News
Nyika inofamba neAmerican manhamba uye hapana mibvunzo yakabvunzwa
Kushanya kweTurkey kuri kuenda panguva dzakaoma
Kubhururuka kubva kuUS kana Russia kuenda kuTurkey hakuna dambudziko. Dzakawanda dzendege dzeTurkey Airlines kubva kuUS magedhi dzinosiya nemitoro yakanaka. Imhaka yekuti vese vekuAmerican nevamiriri veTurkey havana hanya.
Kuwana mazino kana kudyara bvudzi ndicho chikonzero chepamutemo chevashanyi vazhinji vekuAmerican neRussia, masevhisi akadaro anowanikwa kutengeserana muTurkey.
Mutori wenhau weTN achangobva kubhururuka kubva kuUS kuenda kuTurkey akasara mavhiki maviri adzoka uye haana kana kubvunzwa nezve tembiricha yake uye manzwiro aaiita.
United Airlines yakamubvunza muHonolulu paanenge achienda kuChicago nezve COVID. Pane imwe nguva muChicago pakanga pasisina mibvunzo.
Pakudzoka kwake, akatarisa mabhegi ake muIstanbul kuenda kuLos Angeles paaienda kuTurkey Airlines kuenda kuMunich neUnited Airlines kuenda kuSan Francisco nekuLos Angeles. Hapana kana akambomubvunza kuti ainzwa sei. Vakuru veGerman havana kumubvumidza kupinda munyika kubva paakabhururuka kubva munyika ine njodzi huru (Turkey) achienda kune nyika ine njodzi huru (USA)
Akakwira United Airlines muMunich pasina chero mibvunzo uye akapfuura nekubva kune dzimwe nyika uye tsika mumaminetsi maviri. Hapana COVID bvunzo inodiwa,
Iyo inogona kutsanangura kuti nei nhamba yekutanga vashanyi muTurkey ichibva kuUSA neRussia panguva ino.
Istanbul inoramba iri guta rakabatikana. Mabhawa zvino avhara pakupera kwevhiki, asi panogara paine zvakawanda zvakasarudzika, uye mapurisa mazhinji ane maziso mazhinji asingaoni nechikonzero.
Tourism muTurkey iri kuenda kumberi uye vashanyi vanofarira kuenda kune imwe nyika isina chero zvirambidzo. Kwete kunetsekana nezvekupfeka mamask pamabhesi ekuona nzvimbo.
Iko kungovhenekesa chete ndiko kubhururuka iyi yekupedzisira ndege kubva kuLos Angeles kuenda kuHonoluluy. Bvunzo ye COVID-19 inodikanwa uye haigone kuve mukuru kudarika mazuva matatu. Nekudaro bvunzo dzakadai dzakanyanya kugona kuwana. Mutori wedu akakwanisa kuwana bvunzo mukungoenda kukhemisi pasina kusangana, asi mhedzisiro yacho yakatora vhiki imwe kuti idzoke. Akabvunzwa muHonolulu kuti aone kugara kwemazuva gumi nemana.
Iye zvino Turkey yakachinja nzira yaraitaura nezvayo mazuva ese COVID-19 hutachiona, yakasimbisa izvo mapoka ezvokurapa nemapato anopikisa agara achifungidzira - kuti nyika yakatarisana nekuwanda kunotyisa kwematambudziko ari kukurumidza kupedza hutano hweTurkey.
Mune imwe-kumeso, Mutungamiri Recep Tayyip Erdogan's hurumende svondo rino yakatangazve kuzivisa zvese zvakanaka coronavirus bvunzo - kwete chete huwandu hwevarwere vari kurapwa zviratidzo - vachisundira huwandu hwezviitiko zvezuva nezuva kusvika pamusoro pezviuru makumi matatu. Nedhata nyowani, nyika yakasvetuka kubva pakuva imwe yenyika dzisina kunyanya kubatwa muEurope kuenda kune imwe yeakanyanya kurohwa.
Izvo hazvina kushamisika kuTurkey Medical Association, iyo yanga ichinyevera kwemwedzi kuti zvimiro zvekare zvehurumende zvaive zvakavanza hunaku hwekupararira uye kuti kushomeka kwekujekesa kuri kukonzera kuwedzera. Iri boka rinochengetedza, zvisinei, kuti huwandu hweshumiro hwakadzikira kana zvichienzaniswa nekufungidzira kwehutachiona hutsva hunosvika zviuru makumi mashanu pazuva.
Hapana nyika inogona kumhan'ara manhamba chaiwo pakupararira kwechirwere ichi sezvo akawanda masymptomatic kesi achienda asingaonekwe, asi nzira yapfuura yekuverenga yakaita kuti Turkey iratidzike senge iri mushe mukuenzanisa kwepasirese, nematare matsva ezuva nezuva ari pazasi zvakanyanya pane akataurwa munyika dzeEurope kusanganisira Italy, Britain neFrance.
Izvo zvakachinja Chitatu sezvo mutambo wezuva nezuva weTurkey wakada kuita zvakapetwa kane kubva pamazana manomwe nemazana mana kusvika makumi matatu nemazana matatu.
Zvipatara zvemunyika zvakatwasanudzwa, vashandi vekurapa vakapiswa uye vanochera makondirakiti, avo vakambonzi vanochengeta chirwere ichi, vari kunetsekana nekutakura hutachiona, Sebnem Korur Fincanci, anotungamira sangano, akaudza The Associated Press.
Kunyangwe hazvo gurukota rezvehutano rakaisa nzvimbo yekugara pamubhedha yeICU pa70%, Iye munhu anotungamira Istanbul-based Intensive Care Nurses 'Association, anoti mubhedha wevanorwara zvakanyanya muzvipatara zveIstanbul zvatozara, vanachiremba vachitsvaga kutsvaga nzvimbo vanorwara zvakanyanya.
Pane kushomeka kwevanamukoti uye vashandi varipo vanamukoti vapera.
Kufa kwemazuva ese COVID-19 kufa kwakasimudzirawo manhamba, kusvika ku13,373 neMugovera pamwe nekufa kutsva 182, mukudzosera hupfumi hwenyika iyo yakanga yarumbidzwa nekukwanisa kuchengetedza kufa kwevanhu pasi. Asi iwo marekodhi manhamba anoramba achipokana futi.
Meya weIstanbul Ekrem Imamoglu akati vanhu zana nemakumi masere nevatanhatu vakafa nezvirwere zvinotapukira muguta musi waMbudzi 186 - zuva iro hurumende yakazivisa nzufu 22 chete dzeCoVID-139 dzenyika yese. Meya akataurawo kuti kuvigwa kunosvika mazana mana nemakumi mana kuri kuitika zuva nezuva muguta remamiriyoni gumi nemashanu zvichienzaniswa neavhareji 19-450 yakanyorwa munaMbudzi gore rakapfuura.
Koca akataura kuti huwandu hwevarwere zvakanyanya uye kufa kuri kuwedzera uye akati mamwe maguta anosanganisira Istanbul neIzmir ari kusangana ne "yavo yechitatu yepamusoro". Turkey yaizomirira, zvakadaro, kwemavhiki maviri kuti vaone mhedzisiro yekudzoka kwevhiki uye zvimwe zvinorambidzwa vasati vatarisa kukiyiwa kwakasimba, akadaro.
Zvichakadaro, nyika yasvika pachibvumirano chekutambira mishonga inosvika mamirioni makumi mashanu yemushonga wakagadzirwa nekambani yemishonga yekuChina inonzi SinoVac uye inotarisira kutanga kuupa kune vekurapa nevanorwara zvikuru mwedzi unouya. Izvo zvakare zviri muhurukuro dzekutenga mushonga wakagadzirwa naPfizer pamwe nekubatana neBioNTech kambani yemishonga. Mushonga wakagadzirwa neTurkey wakarongedzerwa kuve wakagadzirira kushandiswa muna Kubvumbi.